Guddoomiyihii hore ee Maxkamadda Sare ee Soomaaliya Oo Sheegay inuu Ku soo Laabanayo Somaliland oo uu dhalasho ahaan ka soo jeedo iyo sababta!! – Tusmoonline.com
Guddoomiyihii hore ee Maxkamadda Sare ee Soomaaliya Oo Sheegay inuu Ku soo Laabanayo Somaliland oo uu dhalasho ahaan ka soo jeedo iyo sababta!!
Wararka	January 10, 2017	70	Like
Muqdisho (TUS)- Guddoomiyihii hore ee maxkamadda sare ee dalka Soomaaliya Garyaqaan Ceydiid Cabdillaahi Ilko Xanaf, oo Warbaahinta kula hadlay magaalada Muqdisho ayaa ka hadlay doorashada Xubnaha Aqalka sare ku matalaya xubnaha ka soo jeeda Somaliland ee dalkaasi ka tartamaya isaga oo sheegay in uu ku laaban doono Somaliland oo uu dhalasho ahaan ka soo jeedo.
Waxa uu sheegay Ceydiid Ilko Xanaf in uu dib ugu laabanayo deegaanada Jamhuuriyadda Somaliland uu kasoo jeedo dhalasho ahaan hadii loo diido in uu isku soo sharaxo in uu kamid noqdo Aqalka sare ee Baarlamaanka Soomaaliya.
”Waxaa ii muuqda fara galin lagu hayo xubnaha Aqalka sare ku matalaya gobolada Waqooyi, madaxda dowlada ayaa si gaar ah ula doonaya kuraastaasi siyaasiyiin ay si gaar ah u wataan, hadii la ii diido in ana isku soo sharaxo labada Aqaal waxaan ku laabanayaa Somaliland ay caruurteeda joogaan ” Ayuu yidhi Ilko Xanaf.
Gudoomiyihii hore ee Maxkamada sare ee dalka Soomaaliya Garyaqaan Ceydiid Ilko Xanaf ayaa cadaadis xoogan kala kulmaya madaxda sare ee dalka kuwaa oo la sheegay in ay ka ilaalinayaan in uu mar kale kasoo dhax muuqdo siyaasada Soomaaliya.
AGaryaqaan Ceydiid Ilko Xanaf ayaa Baarlamaanka Soomaaliya kusoo dhax jiray sannado badan, waxaanu mudooyinkii ugu dambeeyay ahaa Guddoomiyaha Maxkamada sare ee dalkaasi Soomaaliya, waxa uuna kamid ahaa Siyaasiyiinta saameynta badan ee kasoo jeeda Somaliland ee ka xammaasha Soomaaliya.
Ma aha masuulkii ugu horreeyey ee ka soo dhaca sallaanka dalkaasi Soomaaliya ee hungureeya in uu dib isaga soo laabto Somaliland.